Fun Archives - Shwe Khit Online TV
December 4, 2021 Bo Bo 0
James Fridman ဆိုတဲ့ Photoshop ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ တွစ်တာ၊ ဖေ့ဘုတ်စ်အစရှိတဲ့ လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာတွေမှာ အတော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးရသလဲဆိုတော့ သူ့ကို ဓာတ်ပုံလေးတွေပို့ပြီး ပြင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းသူတွေကို သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအတိအကျ ပြင်ဆင်ပေးနေလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူပြင်ဆင်ပြီးပြန်လည်ပေးပို့တဲ့ပုံတွေက ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင် မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာဘဲ ဟာသဆန်ဆန်ပုံတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာသပုံတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးနော် …… shwekhitonlinetv.com ၁။ ဒီဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ရဲ့အမေက ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက်ပါတဲ့။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံကိုသူ့အမေကိုပြဖို့အတွက် အနောက်ကဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တုကို Cover လုပ်ခိုင်းတာပါ။ အဲ့ဒါကို James လုပ်ပေးလိုက်ပုံက ….. shwekhitonlinetv.com […]
November 16, 2021 Wai Phyo Oo 0
ဒီတစ်ခေါက်ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ထိုးညဏ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြေရှင်းသွားကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေဆို တော်ရုံ လူကြီးတွေတောင်စဥ်းစားမိမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီကလေးတွေ ဘယ်လိုမျိုး ညဏ်ကောင်းထားကြသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ….. shwekhitonlinetv.com ၁။ Phone stand၊ Phone holder တို့လိုအရာတွေမရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဒီကလေးမလေးရဲ့ အိုက်ဒီယာကို အတုယူသင့်ပါတယ်။ သူက အဝတ်လှန်းတဲ့ ချိတ်တစ်ခုနဲ့ ဖုန်းကိုလက်က ကိုင်စရာမလိုအောင် ဖန်တီးထားတယ်လေ။ shwekhitonlinetv.com ၂။ ဒီကလေးမလေးကကျတော့ လည်ပင်းနဲ့နောက်ကျောနာကျင်မှုတွေမဖြစ်အောင် […]
ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေကို အများနဲ့ မတူအောင် ဖြေရှင်းတတ်ကြသူများ
October 28, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြေရှင်းကြတဲ့ သူတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ ဘယ်လိုတွေ ဖြေရှင်းကြလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာ အလှပြင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ မီးအလင်းရောင် ကောင်းကောင်းမရလို့ မိတ်ကပ်ဆရာက အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတဲ့ ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပုံလေးဟာ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ် […]
October 24, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက မရိုးနိုင်သော အလွဲ တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုမျိုး အကြီးအကျယ် လွဲကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ဒူးတုန်တဲ့သူတွေ မတတ်သင့်တဲ့ လှေကား အခုမြင်နေရတာကတော့ မြေညီထပ် နဲ့ ပထမ ထပ်ကို ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ လှေကား ပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ် […]
October 20, 2021 Yan 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့ တစ်ကယ့် အစစ်အမှန် လားဆိုတာ ယုံရခက်စေမယ့် ပုံလေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ပုံလေးတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ လေပေါ်ဝဲနေတဲ့ ထိုင်ခုံ အခုပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ လေပေါ်ဝဲနေတဲ့ ထိုင်ခုံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုင်ခုံမှာ ထောက်လေးကြောင်း […]
အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား
October 19, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို ဝတ်ပြီး ရုံးလာတက်တဲ့ အမျိုးသား အကြောင်းပါ ။ ဘာကြောင့် သူ ဒီလိုမျိူး ဝတ်ပြီး လာလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆော်ပိုလို မြို့က ဘဏ်တစ်ခုမှာ လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ အလုပ်မထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ စပိုက်ဒါမန်းလို […]
အိုင်ဒီယာ level နောက်တစ်ဆင့်ကို ရောက်နေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဒီဇိုင်းများ
September 12, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခေါက်မှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖြစ်အောင် တီထွင်လိုက်ရာကနေ လူပြောစရာ ဖြစ်သွားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုမျိုး အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဒီဇိုင်းတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်က ပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Donald Toilet အခု မြင်ရတဲ့ ပုံကတော့ Donald ပုံစံ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ဘိုထိုင် […]
လူတွေကို လှည့်ဖြားထားတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က ဓာတ်ပုံများ
August 28, 2021 Shwe Khit Online TV 0
လူမှုကွန်ယက် မီဒီယာတွေ အားကောင်းလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကာလလို အချိန်မျိုးမှာတော့ နိုင်ငံတကာက သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရာအားလုံးက အဆိုးအကောင်း ရောပြွမ်းတည်ရှိနေတက်တဲ့ သဘာဝအရ သတင်းအစစ်အမှန်တွေရှိသလို သတင်းတုတွေနဲ့ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းတွေ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အသိညဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီးရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခု ဆောင်းပါးလေးမှာ ဖော်ပြသွားမှာကတော့ အကြောင်းအရင်းသေချာစွာ မသိခဲ့ရင် အစစ်အမှန်လို့ ထင်မှတ်မှားသွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ […]
အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ မရည်ရွယ်ပဲ ပါသွားကြသူများ
June 2, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်း ပါသွားကြတဲ့ အပြင်က သူစိမ်းတွေ ရဲ့ ပုံလေးတွေကို‌ ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ အပြင်အတူထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ပုံထဲမှာ တစ်ခြားအပြင်က ကိုယ်မသိတဲ့သူတွေက ပိုစ့်ပေးနေတာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ ။ အခုဖော်ပြပေးမဲ့ အထဲမှာလည်း ဒီလို ပုံလေးတွေ ပါလို့ တစ်ပုံချင်းစီ အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…. ၁ ။ […]
January 29, 2021 Bo Bo 0
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာ ခွေးလေးတွေ ကြောင်လေးတွေလိုမျိုး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို မွေးမြူထားတဲ့သူတွေရှိလားမသိဘူးရှင့် … ။ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေး မှာပါမယ့် သခင်တွေလောက် မိမိရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အပေါ် ဂရုစိုက်ရဲ့လားဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးနော် … ။ shwekhitonlinetv.com ၁။ မိုးရွာနေပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ခွေးကလေးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်ချင်သောအခါ … ။ shwekhitonlinetv.com ၂။ ဒီခွေးလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးဟာ သူ့ချစ်သူနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်လောက်ကတည်းက လမ်းခွဲထားကြတဲ့သူတွေလို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ကောင်လေးကတော့ သူတို့မွေးထားခဲ့တဲ့ […]
လူ့အသက်များစွာကို ဇီဝိန်ခြွေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အရှိဆုံး ရေကန်ကြီးများ